४० वर्ष पुग्दा मानिसको के अर्थ हुन्छ | स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | | फिट, स्वास्थ्य
यो एक अन्तर्निहित चरण हो जुन प्रत्येक व्यक्तिले पार गर्दछ। हो वा हो, मान्छे 40 वर्ष पुग्नेछ र त्यो अपरिहार्य हुनेछ। धेरैले तिनीहरूलाई राम्रो विश्वासमा लिन्छन् र सुधार को एक चरण। अरूहरू ठूलो भावनात्मक संकटमा प्रवेश गर्नेछन्, तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि यो दशकमा प्रवेश गर्दा युवाहरूको अपेक्षाहरू भन्दा बढी छ।
४० वर्ष पुगेका मानिस पुग्न सक्छन् आफैलाई धेरै प्रश्न सोध्नुहोस्। यो नयाँ प्रविष्टिमा रोकिएको छ र वर्षौं अघि बसेको कुराको त्यो सानो मूल्याङ्कनमा प्रवेश गर्छ। यहीँबाट भ्रम छ सबै अवास्तविक भ्रमहरू पूरा गर्नुहोस् वा वर्षौंको फाइदा उठाउन नसकेको निराशा।
1 ४० वर्ष पुग्नुको अर्थ के हो ?
2 40 मा संकट?
3 40 वर्षीय पुरुषको शरीरमा परिवर्तनहरू
4 महिलाहरु चालीस वर्ष रुचाउँछन्
४० वर्ष पुग्नुको अर्थ के हो ?
प्रत्येक चरणमा जस्तै, यसलाई एक अवधि र अर्कोको प्रवेश द्वारको रूपमा मान्न सकिन्छ व्यक्तिगत दृष्टिकोणको लागि उपखण्ड। के सबै सपना साँच्चै पूरा भएको छ? 40 वर्षको उमेरमा तपाईले यो विचार रोप्न सक्नुहुन्छ किनभने सामान्यतया अनगिन्ती परियोजनाहरू पहिले नै सम्पन्न भइसकेका छन्। अब सायद हामी को हौं र यदि हामी जनताको रूपमा आफूलाई पूरा गर्न जारी राख्न सक्छौं भने विचार गर्ने समय हो।
पुरुषहरूले के सोच्न सक्छन् भन्ने बारेमा धेरै कथाहरू संग्रहित छन् जब तिनीहरू आफ्नो 40 मा प्रवेश गर्छन्। धेरै समर्थन जहाँ एक अद्भुत चरणमा प्रवेश तपाईं थप आराम गर्न सुरु गर्नुहुन्छ र अरू सबै कुराले धिक्कार गर्दैन। अरू तिनीहरूले उहाँको रूपमा हेर्छन् शारीरिक रूप मा गिरावट, तर अरूले देख्छन् कि तिनीहरूको कामुकता राम्रोको लागि परिवर्तन हुन्छ, तिनीहरू एकअर्कालाई त्यो दृष्टिकोणबाट अझ बढी चिन्ने गर्छन्। अन्य पुरुषहरू प्रेम, आर्थिक र सामाजिक विषयवस्तुलाई सम्मान गर्दै, आफूले रोपेको सबै फसललाई फर्केर हेरेर यस अवधिमा प्रवेश गर्छन्।
धेरै पुरुषहरूले यो महसुस गर्छन् तिनीहरू आफ्नो प्राइममा पुगेका हुन सक्छन्। तिनीहरूले धेरै असुरक्षाहरू पछाडि छोड्छन् र नयाँ चरणको सामना कसरी गर्ने भनेर जान्दछन्। तिनीहरूले आफ्ना गल्तीहरू सच्याउन सक्षम भएका छन् र धेरै खाडलहरू पार गरेका छन्, त्यसैले अब तिनीहरू अझ बढी बुद्धि महसुस गर्छन् र कसरी सेक्सी बन्न जान्छन्।
तपाईको आकांक्षा बढ्दै गएको हुन सक्छ र अब ती धेरै छन् आफ्नो समय र ठाउँ खोज्नमा केन्द्रित। अब उनीहरूलाई थाहा छ के महत्त्वपूर्ण छ र चीजहरूमा थप गुणस्तर खोज्न चाहन्छ। तिनीहरूको असुरक्षाको सन्दर्भमा हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, उनीहरूलाई राम्रो भविष्यको साथ सबै कुराको सामना गर्ने तरिका थाहा छ, तिनीहरू तिनीहरूका कार्यहरूको अधिक मालिक हुन् र उत्सुक छन् ताकि पछि आउन सक्छ। कोही आफ्नो परियोजनाहरू विस्तार गर्न चिन्तित हुनेछन् र अरूलाई तिनीहरूको दिनचर्या जीवनमा फिट हुन आवश्यक हुनेछ।
40 मा संकट?
यो उमेरमा सबैलाई समय बित्ने कुरा थाहा हुन्छ । प्रसिद्ध 40s संकट वास्तविक हुन सक्छ वा नहुन सक्छ, व्यक्ति मा निर्भर गर्दछ। जीवनको सन्तुलन बनाइन्छ र यो वास्तविकतासँग विपरित हुन्छ, पूरा भएका र नभएका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्दै।
धेरै पुरुषहरु तिनीहरू निराश हुन सक्छन् र यसले तिनीहरूलाई पीडा दिन्छ। महसुस गर्छन् निराश र निराश वर्षौंको उत्तराधिकारको लागि जहाँ उनीहरूले आफ्ना सबै उपलब्धिहरू पूरा गरेका छैनन् र यसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यबाट टाढा लैजान्छ। अरूले तपाईंको अवलोकन गर्नेछन् शारीरिक कमजोरी, तिनीहरू त्यति बलियो छैनन्, उनीहरूले मांसपेशीहरू बढी दुखेको महसुस गर्छन्, र तिनीहरू धेरै थकित हुन्छन्। अर्को खण्डमा हामी यो उमेरसँगै आउने परिवर्तनहरूको वर्णन गर्छौं।
40 वर्षीय पुरुषको शरीरमा परिवर्तनहरू
40 वर्षको उमेरदेखि, पुरुषहरू पहिले नै प्रयोग गर्न थाल्छन् आफ्नो शरीर मा परिवर्तन। यो उमेरमा रगतमा टेस्टोस्टेरोन कम हुन थाल्छ र यो तथाकथित प्रवेश गर्दछ एन्ड्रोपज, जहाँ उनीहरूको जीवनको गुणस्तर अलिकति हराएको छ।
यी परिवर्तनहरू बीचमा तपाईंले महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ थप थकान, अनिद्रा, हड्डी बिग्रने र भिसेरल बोसोमा वृद्धि। यो यौन इच्छामा कमीको साथमा हुनेछ र केहि अवस्थामा इरेक्शन खराब गुणस्तरको हुन थाल्छ। यो हर्मोनको कमीले पनि असर गर्छ मूड थप चिन्ता र केहि अवस्थामा अवसाद निम्त्याउँछ। यी परिवर्तनहरू प्राकृतिक घटनाको रूपमा त्याग्नु पर्छ र तिनीहरू द्वारा उत्पन्न भएको होइन hypogonadism।
महिलाहरु चालीस वर्ष रुचाउँछन्
चालीस वर्षको पुरुषहरू भाग्यमा छन्। त्यहाँ धेरै तथ्याङ्कहरू छन् जसले सुझाव दिन्छ कि महिलाहरू यस उमेरका पुरुषहरूलाई प्राथमिकता दिन्छन् उनीहरूलाई पहिले नै थाहा छ उनीहरू के चाहन्छन्। सुरुमा, धेरैसँग पहिले नै 25 वर्षको उमेरमा भन्दा धेरै स्पष्ट विचारहरू छन् र उनीहरूलाई थाहा छ कि एक जोडीको रूपमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ।
सायद जीवनले तपाईंलाई धेरै चोटि हिर्काएको छ र तिनीहरू आफ्नो जीवनलाई कसरी निर्देशित गर्ने जान्छन्। तिनीहरूसँग पहिले नै आफ्नै स्वतन्त्रता छ, तिनीहरूको साथीहरूको सर्कल, तिनीहरूको अध्ययन, र तिनीहरूको आफ्नै घर र कार। यसले बनाउँछ तिनीहरू धेरै आकर्षक देखिन्छन्.
विभिन्न अध्ययनहरूद्वारा सङ्कलन गरिएका केही तथ्याङ्कहरूका अनुसार, एक व्यक्ति ४३ वर्षको उमेरमा भावनात्मक रूपमा परिपक्व हुन थाल्छ, त्यसैले तिनीहरू धेरै समझदार पुरुषहरू छन्, तिनीहरूले आफ्ना साझेदारहरूलाई राम्रोसँग समर्थन गर्छन् र तिनीहरू आफ्नो परिवारको धेरै सुरक्षा गर्छन्। जीवन पश्चातापबाट गुज्रनु होइन, त्यसैले यदि तपाईं यस महान चरणमा पुग्नबाट निरुत्साहित हुनुभएन भने, यो विजयको पर्यायवाची पनि हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » फिट » ४० वर्षको हुनु भनेको मानिसको लागि के हो?
यी पुरुषहरूका लागि उत्कृष्ट लक्जरी कपडा ब्रान्डहरू हुन्